Akụkọ - Gini bu isi ihe eji egosi ihe omimi nke ihe ndi mmadu na-acho n'ime ulo oru ugbo ala?
Gịnị bụ isi akụkụ nke metal miri ịbịaru automotive zọ akụkụ na akpaaka ụlọ ọrụ?
Ngwongwo ihe osise a dị omimi bụ usoro na-arụ ọrụ (akụkụ ịpị) nke ọdịdị na ogo achọrọ site na itinye ikike mpụga na efere, warara, ọkpọkọ, profaịlụ, na ihe ndị yiri ya site na pịa na ịnwụ (ebu) ime ka nrụrụ plastik ma ọ bụ nkewa. Stamping na ibe ha bụrụ otu plastic nhazi (ma ọ bụ mgbali nhazi), ịgụnye akpọ ibe ya bụrụ. Ogidi ndị a zoro ezo na-adịkarị ekpo ọkụ na mpempe akwụkwọ na-acha uhie uhie.
Ihe omimi miri emi na-esite na stamping na stamping metal ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na-abụghị nke metal na nrụgide nke pịa.
Karịsịa nwere njirimara ndị a:
A na-emepụta akụkụ ihe omimi miri emi site na ịpịgharị n'okpuru ogige nke ihe oriri dị ala. Akụkụ ndị ahụ dị arọ ma dị mma na nkwụsi ike, na mgbe ihe mpempe akwụkwọ na-emebi emebi, a na-emezi ihe dị n'ime nke ígwè ahụ, nke mere na akụkụ stampụ ka mma. Ike abawanye.
Na usoro stampụ, ebe ọ bụ na elu nke ihe anaghị emebi emebi, ọ nwere ezigbo mma dị mma yana ọdịdị dị mma ma mara mma, nke na-enye ọnọdụ dị mma maka eserese n'elu, electroplating, phosphating na ọgwụgwọ ọzọ.
E jiri ya tụnyere ihe nkedo na ihe mgbaghara, akụkụ ndị na-adọrọ adọrọ dị gịrịgịrị, edo, ọkụ na ike. Stamping nwere ike imepụta ihe eji arụ ọrụ na ọgịrịga, ọgịrịga, mkparịta ụka ma ọ bụ ọgụ na-esiri ike imepụta site na usoro ndị ọzọ iji nwekwuo ike ha. N'ihi ojiji nke nkenke ebu, nkenke nke workpiece bụ ruo micron na repeatability dị elu.
Njirimara akụkụ nke akụkụ ihe omimi miri emi:
Dị akụkụ nke akụkụ ndị a dọtara kwesịrị ịdị mfe ma dị nkenke dịka o kwere mee, a ga-adọrọ ya dịka o kwere mee;
Maka akụkụ ndị ọ dị mkpa ka e nwekwuo omimi ọtụtụ ugboro, a ga-ekwe ka elu ime na mpụta nwee akara nke nwere ike ime n'oge usoro eserese, ebe ị ga-ahụ ogo dị mkpa dị mkpa;
N'okpuru ebumnuche iji hụ na achọrọ nzukọ, a ga-ekwe ka akụkụ dị n'akụkụ nke onye na-ese ihe dị omimi nwere ụfọdụ uche;
Ebe dị anya site na nsọtụ oghere ahụ ma ọ bụ nsọtụ flange ahụ n'akụkụ mgbidi kwesịrị kwesịrị ekwesị;
Ala na mgbidi nke mpempe ihe osise miri emi, flange na mgbidi ahụ, na okirikiri akụkụ nke akụkụ akụkụ akụkụ anọ kwesịrị ịdị mma. Were okirikiri akụkụ nke ala akụkụ na mgbidi nke ịbịaru akụkụ 1pr = 1.5mm, mm1r2p =, ihe omimi miri ịbịaru na The nkuku okirikiri nke mgbidi mm2rd1 =, mm5.1r2d =;
A na-achọkarị ihe ndị e ji ese ihe iji nweta ezigbo plasticity, ụyọkọ mkpụrụ dị ala, ọnụ ọgụgụ nnukwu efere ndọtị ọnụ, yana obere ntụ ụgbọ elu.
Post oge: Nov-10-2020